efrijini Quick, Quick imishini okokuqandisa, efrijini Kuvunguza, Umhubhe efrijini-JET COLDCHAIN
Self-emakhiyubhi Kuvunguza Freezer
Impingement Umhubhe Freezer
Imininingwane Precool Freezer
Imininingwane Plate Freezer
Self-equkethwe Plate Freezer
JET COLDCHAINEngineering ngoba izwe uqabula
JET ngokukhethekile ifriji ubunjiniyela nezimboni zokudla, inikeza premium imikhiqizo mechanical kagesi kanye namasevisi ikakhulukazi aquaculture nokudla izimboni ukuhlangabezana nezimfuno ezithile Amakhasimende ethu nge sebhithi yesimanje sezihambile lobuchwepheshe.
We ngokukhethekile ifriji zezimboni nezimboni zokudla.
Block Ice Machine Slurry Ice Machine Tube Ice Machine Izinhlayiya zeqhwa Ice Evaporator Amanzi olwandle anezinga elingaguquguquki izinhlayiya zeqhwa Ice Machine Industrial izinhlayiya zeqhwa Ice Machine
kwasolwandle yenkukhu khekhe imikhiqizo idayari Frying baking
Xhumana Nathi uma ufuna consultant ochwepheshe.
Yenza I okuhlakaniphile Ukukhetha
JET ColdChain, A strong inhlanganisela ngu ZhongRong Group kanye JET UK Foodtech Group, ayehlukanisele yokukhiqiza eziphambili okusheshayo okokuqandisa imishini kanye nokudla imishini yokudla.
Nge engu-15 ngaphezulu kuka okokuqandisa ubuchwepheshe ngamazwe isicelo nakho.
Siye isihambile womshini umugqa,esiqinile ukulawula izinga uhlelo kanye nasemathubeni sobudala ...
Nge ukuqeqeshwa njalo lobuchwepheshe, yesondlo zokuvimbela futhi kuthuthukiswe imishini izinhlelo, JET njalo sisebenzela ukwandisa umkhiqizo kahle kanye nokusebenza ukuze silonde customers` yethu utshalomali.
izingxenye Main eliyisipele imfuyo JET ukuba ngcono isitshalo sakho nokwandisa umkhiqizo isivuno.
JET supply amabanga egcwele okusheshayo imishini ukuqanda wenze umklamo ofanelana ukuhlangabezana ezahlukene yokudla izidingo.
Yiba isinyathelo esisodwa phambili njalo etholakalayo noma nini is inkonzo yethu isiqondiso. professional, okusezingeni eliphezulu kahle, ukusabela okusheshayo ukuqinisekisa ungase uthole ukwaneliseka.
HLOLA okokuqandisa YETHU TECHNOLOGIES
JET ColdChain ubuchwepheshe uvela Europe design: ukusebenza kahle eliphezulu futhi ongaphakeme power ukusetshenziswa, ukuphepha kanye nenhlanzeko. Umklamo umkhiqizo luhlanganisa Europe ubuchwepheshe ehamba namakhono izikebhe, imishini yenziwa ngaphansi global supply chain ukuthenga isu kanye. Nge okuqhubekayo emisha lobuchwepheshe kanye umkhiqizo ngcono, JET manje ungumnikazi eziningi nokuphathelene amalungelo empahla, njenge: okusezingeni eliphezulu kahle Kuvunguza uhlelo okokuqandisa, okusezingeni eliphezulu kahle zangaphambi Ukupholisa uhlelo, impingement uhlelo okokuqandisa, fluidization uhlelo okokuqandisa, othomathikhi defrosting ubuchwepheshe, othomathikhi yokuhlanza ubuchwepheshe kanye high kahle Ukuhamba ubuchwepheshe. Ehamba phambili ukusebenza kahle eliphezulu, low power ukusetshenziswa chain abandayo umkhakha, JET ihlose ukwakha inzuzo ephakeme futhi ukukhula esimeme amakhasimende.
Bhalisela i-iphephandaba lethu futhi silandele zokuxhumana
umkhakha ehola izixazululo zethu
Esiyiqhwa Isixazululo Izithelo & imifino Imboni
JET okokuqandisa esiyingqayizivele ubuchwepheshe kwenza izithelo nemifino simisiwe njengoba okusheshayo ngangokunokwenzeka ukuze inciphise umonakalo yeselula, enikeza ngendlela engaphezulu kakhulu engabizi ukudala premium uqabula kunokuba fresh imikhiqizo ukudla ukuthi anikele lula esiphezulu futhi abathengiswa ngentengo premium.
Zeqhwa Isixazululo Ukuze Elungisiwe Ukudla Industry
JET isebenzisa izinto zobuchwepheshe obuphambili ukuze ngokwezifiso futhi ekuklameni nasekwakheni imishini umnkantsha ukuthi zifanelane nezidingo noma yikuphi ukudla okuthola lelungiselelwe. IQF yethu nokuqondisayo ukusebenza ikakhulukazi kahle imikhiqizo ezincane ucezu like amadombolo noma entwasahlobo imiqulu. Sihlala sihlele imikhiqizo yethu ukuba eyongayo futhi ezingabizi kanye ukugcina imikhiqizo yokunambitha omkhulu eside ngemva inqubo okokuqandisa.
Zeqhwa Isixazululo Ukuze Bakery Imboni
JET silwenza imishini okokuqandisa ukuze uvumelane nezidingo zakho ethize. Ukuze imikhiqizo ephuma isinkwa amakhekhe amakhukhi noma ehla futhi pasta, le ukudla okomile nesitolo wemboni ihlanganisa iqoqo ahlukahlukene imikhiqizo ufulawa ezisekelwe kuhlanganise nesitolo amamiksi kanye nemikhiqizo eqandisiwe Inhlama. Zonke imikhiqizo yethu zenzelwe ukuba eyongayo futhi ezingabizi.
Zeqhwa Isixazululo Ukuze wenkukhu Icubungula Imboni
Imboni yenkukhu has izici eziningi kangaka ukhathazeke, ukudlulela kwamagciwane, ngiyajabula, ukukhula webhaktheriya, okwandisa izindleko, kanye nemithetho isiqondiso ukudla. JET siveza izixazululo lezi zinkinga ukuze ukwazi ukucubungula futhi iqhwa yenkukhu enempilo, fresh futhi engabizi ukuze nigcine amakhasimende akho ubuya ngaphezulu.
Zeqhwa Isixazululo Ukuze kwaselwandle Icubungula Imboni
JET ibambisene kwasolwandle ukucutshungulwa abalingani nokwakha imigqa ukukhiqizwa izinhlanzi, izimbaza, nezimfanzi, nokunye ukudla kwasolwandle. design yethu ehambisana nobuchwepheshe umnkantsha kwenza ukucutshungulwa kahle futhi ngokuphelele kuyilapho esaziwa ukunambitheka fresh sengathi Kwathi nje emanzini.
Bhalisa ukuze Newsletter yethu ukuze Thola izibuyekezo Latest